Wasaaradda amniga oo kaga digtay milkiilayaasha garoomadda Kub... | Universal Somali TV
Wasaaradda amniga oo kaga digtay milkiilayaasha garoomadda Kubadda Cagta inay amarada Shabaab u hogaansamaan
Kadib amaradii ka soo baxay Al Shabaab ee ahaa in la xiro goobaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta Degmooyinka Gobolka banaadir, ayaa arintaasi waxaa ka hadlay Wasaaradda amniga dowladda Federalka Somaliya.
Afhayeenka Wasaaradda amniga C/casiis Xildhibaan ayaa wuxuu sheegay in aanan la aqbali karin iyadoo ammaanka Magaalada Muqdisho ay gacanta ku hayso dowladda Federalka Somaliya in haddana amarada Shabaab ay ka dhaqan galaan Magaalada.
Wuxuu sheegay in milkiilayaasha Garoomadda Kubadda Cagta Muqdisho uu kaga digaayo inay u hoggaansamaan amarada ka soo baxaya Al Shabaab.
“Waxaan kaga digeynaa masuuliyiinta goobaha lagu ciyaaro Kubadda Cagta inay u hogaansamaan amarada Al Shabaab ka soo yeeraya iyo hanjabaadaha ka soo baxa kooxda nabad diidka.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda amniga.
Garoomadda Kubadda Cagta ee loo yaqaan Salaxa, ayaa la xiray Magaalada Muqdisho intooda badan, inkastoo ay jiraan kuwa furan oo shaqeeya, haddana qaarkood waa ay xiran yihiin oo waxa ay u hogaansameen amarada Al Shabaab, kadib markii Shabaab ay la soo xiriireen.
Kan-xigaDuqa Muqdisho oo kormeeray Isgoysyo k...
Kan-horeCiidamada Nabad Suggida oo weerar qor...
39,206,546 unique visits